Fun Whiskey and Punks - With Explanations
Ny Chemistry Cat dia meme malaza ampiasaina amin'ny fanaovana vazivazy simia. Ao anatin'io Cat Chemistry manokana io, efa lasa ny saka, izay azo tsaratsara kokoa noho ny "trondro". Public Domain
Ireo mpahay siansa dia manana fahatsapana hafanam-po, nefa misy fanakianana simia sy sangisangidy mety hikorontana amin'ny tsy mpahay siansa. Ireto ny sasantsasany amin'ireo sangisangy ambony, fialantsiny, ary fanasokajiana fanazavana.
Inona no iantsoanao trondro iray avy amin'ny atôma sodium roa?
Io tonon-jazavavy io dia misy sodium, Na. Tancredi J. Bavosi, Getty Images
Famaritana momba ny Chemistry: Inona no antsoinao hoe trondro vita amin'ny atomaita roa?
Rehefa miteny ianao hoe "2Na" dia mitovy amin'ny roa-na na ny tonona, ny trondro. Na ny marika ho an'ny sodium, dia ho 2Na ny atôma natiora roa.
Nahoana no tena mahay mamaha olana ny mpahay siansa?
Chemical Solutions. Siede Preis, Getty Images
Famintinana momba ny Chemistry: Inona no ataon'ireo mpahay simia amin'ny famahana olana?
Valiny: Satria manana ny vahaolana rehetra izy ireo.
Manamboatra vahaolana momba ny simika ny mpahay simia Ny valiny dia mamaly ny olana.
Nahoana Ianao no Tsy Azonao Atao Mitandrema?
Ny atôma mifamatotra mifandray amin'ny molekiola. Ny zava-drehetra dia misy atôma. David Freund, Getty Images
Famintinana momba ny Chemistry: Nahoana ianao no tsy matoky ny atôma?
Valiny: Satria mamorona ny zava-drehetra izy ireo!
Ny atôma no fotodrafitrasa fototra ho an'ny zava-drehetra. Ny litera rehetra izay azonao atao, ny manandrana ary ny fofona dia natao avy amin'ny atoma. Ireo olona izay manao zavatra (lainga) dia tsy azo itokisana.
Nahoana no narotsaka tamin'ny Rano ny orsa?
Raha nisy bara mangatsiaka ny volon'ny polisy fa tsy avy any amin'ny faritra avaratra, dia hipoitra amin'ny rano izany. Art Wolfe, Getty Images
Famintinana momba ny Chemistry: Fa nahoana no nanala ny bozaka fotsy tao anaty rano?
Valiny: Satria nisy bara mangatsiaka.
Fomba hafa: Karazana bara mamitsaka ao anaty rano? Bara mangatsiaka!
Bara fotsy ny bara fotsy. Mifangaro ao anaty rano ireo vovoka polar satria ny molekiolan'ny polarin'ny rano (toy ny mahavariana toy ny rano), raha tsy misy ny voly.
Raha nandresy ny Silver Surfer sy ny Iron Man ...
Lehilahy Iron costumed dia manamboatra menaka fanosotra ao Madame Tussauds ao New York City. Astrid Stawiarz / Stringer, Getty Images
Joke an-tsoratra: Raha toa ny Silver Surfer sy ny Iron Man dia niasa, dia izy ireo dia fitambarana.
Raha niara-niasa i Silver Surfer sy Iron Man, dia nahatonga azy ireo ho mpiray dina izany. Izy ireo koa dia ho filoha satria izany no mahazo anao rehefa mampifangaro metaly roa na mihoatra (volafotsy sy vy).
Ny bozaka vy dia bozenina misy atôs-onen-toeran'ny solon-drano. Kodiarana vy izy io satria ity no singa 2 oxidation vy (ferrous) vy. Todd Helmenstine
Ny kodiarana dia C 6 Fe 6 . Ny endriky molekiola dia mitovy amin'ny fiarandalamby fiara Ferris. Ity molekiola mahatsikaiky ity dia tsy misy eo amin'ny natiora fa naseho azy tamin'ny fihomehezana tao amin'ny Exposition Columbia World tany Chicago, Illinois tamin'ny 21 Jona 1893.
Tena mafy ny Chemistry
Ity no rafitra simika misy 1-pentyne, iray amin'ireo alkine. Todd Helmenstine
Joke: Manimba ny akora simika. Ny olona mandinika azy dia mihaodihaody.
Ny simia ara-pôlitika dia iray amin'ireo fianarana simia sarotra indrindra. Ny olona mandinika azy matetika dia manana olana isan-karazany. Alkynes dia molekiola mianatra amin'ny chemema organika. Ny alkynes dia voalaza ho "kinesa rehetra" ary mitovitovy amin'ny "karazany rehetra".
Ny fanadinana organika dia sarotra
Structures chimiques de élément chimiologique organiques avantages et après examen. Todd Helmenstine
Ny fanadinana simia organika dia fantatra amin'ny hoe sarotra ho an'ny mpianatra. Ny sasany dia mety hahatsapa ho toy ny maty mihitsy aza izy ireo na ny mety ho vitany.
Ny dien (prononcée die - een) dia hydrocarbon misy fatorana roambinifolo roa. Tahaka ny sandry sy ny tongotry ny mpianatra 'taorian'ny'.
Raha toa ianao tsy anisan'ny vahaolana ...
Ny ranonorana dia ny fiorenana izay latsaka avy amin'ny vahaolana simika. ZabMilenko, Wikipedia
Chemistry One-Liner: Raha tsy tafiditra ao anatin'ny vahaolana ianao, dia anisan'ilay fako.
Izany dia avy amin'ilay filazana hoe, "Raha tsy anisan'ny vahaolana ianao, dia anisan'ny olana ianao."
Ny fivoahana dia fiorenana izay mametraka ny vahaolana entina mandritra ny fihetsiky ny simika. Azo antoka fa tsy anisan'ny vahaolana intsony izany.
Inona no ataonao amin'ny mpitsabo mpanampy?
Tsy mila marary, mety ho mpanamboatra toeram-pitsaboana ianao, miasa amin'ny laboratoara miaraka amin'ny zavatra simika sy afo. Steve Allen, Getty Images
Joke an-jambany: Inona no ataonao amin'ny mpahay simia malemy?
Valiny: Miezaka mamono helium ianao, ary manandrana manodinkodina, fa raha tsy misy ny zava-drehetra, dia mila barium ianao.
Ny endrika hafa amin'ny vazivazy:
Inona no tokony hataonao amin'ny mpahay simia maty? Barium!
Nahoana no antsoin'ny mpahay simia helium, curium, ary barium ireo singa mpitsabo? Satria raha tsy afaka helium na curium ianao, dia barium!
Ny vazivazy dia midika fa miezaka manasitrana, manasitrana, na mandevina ny mpahay simia ianao, arakaraka ny toe-javatra. Mandinika ireo singa simika ireo mpikaroka , izay ahitana helium , curium , ary barium .
Billy no zanaky ny mpitsabo, ankehitriny dia tsy misy intsony i Billy
Ny rano sy ny solidera solifara dia mitovy amin'ny ao anaty fitoeran-drano. W. Oelen, Creative Commons License
Chemistry Rhyme: Billy dia zanaky ny mpahay simia. Ankehitriny i Billy dia tsy misy intsony. Ny hevitr'i Billy dia H 2 O dia H 2 SO 4 .
Hahita ity rime ity miaraka amin'ny anarana rehetra ianao. Ny rima dia mampianatra ny maha-zava-dehibe ny fandefasana ireo zavatra simika ary ny fitazonana ireo olona mampidi-doza tsy ho tratrarina. Ny rano dia H 2 O, raha ny acid solulfur dia H 2 SO 4 . Afaka misotro rano ianao fa ho faty raha misotro asidra solifara ianao.
Ny vazivazy tsara rehetra dia mivazivazy
Argon no mpanampy amin'izao fotoana izao ao anatin'io fantson-drano io, fa ny moka kosa mamoaka ny hafanana. pslawinski, wikipedia.org
Joke an-tsoratra: te hilaza aminareo aho hoe sangisangy simika, fa ny tsara rehetra kosa dia mifangaro.
Ireo singa mpahay siansa, toy ny argon. Ny vazivazy dia midika fa lasa avokoa ny vazivazy tsara rehetra (argon).
Formula for Chemistry Ice
Rano matevina ?. Pieter Kuiper, Creative Commons License
Tsikombakomba momba ny simia: Raha H 2 O ny rano fisotro madio, inona no atao hoe gilasy?
Valiny: H 2 O cubed
Ny haikin-tsioka ho an'ny rano dia H 2 O. Ny Ice dia tsotra ny endriky ny rano, noho izany dia mitovy ny fomban'ny simika. Na izany aza dia azonao atao ny mieritreritra rano momba ny gilasy na rano kely.
Ity no rafitry ny Bunny-O-Bunny, izay fantatra amin'ny anarana hoe 'ether Bunny'. Todd Helmenstine
Structure chimique comptoir: eter Bunny na bunny-o-bunny
Ny eterika dia molekiolan'ny organika misy atomika oksizenina mifandray amin'ny vondrona karakarikandro roa, toy ny vondrona syl ary ny alkyl.
Chemistry an'ny BHA sy Conservatives Food BHT
Lisitry ny zavatra mamirapiratra ao anaty haizina
Loko mainty hoditra sy tavy
Cyanide Manapoizina amin'ny Apolitra, Peaches, Kerries, Plums, sns.
Kitapo fofona tsotra
Nahoana no mamerovero ny akanjonao ny ranon-tsakafo?
Ahoana no fomba fanaovana remnant polynomique à Madagascar?
Fa maninona no manidina ny zezika?
Nahoana no mamelombelona ny olon-tsotra? Ny Siansa amin'ny vatana sy ny fahanterana
Mafana ny ranomandry sy ny ranomandry miaraka amin'ny sira
Nahoana no Be Grate Grôtônina ny Poizina? Nanazava ny fanafody solanine
Ny Dinosaurs sy ny biby fahiny tany Pennsylvanie
Inona no Kodiarana Tsara Kokoa?
Ireo mpilatsaka an-tsehatra amin'ny Revolisiona Kiobana
Kalandrier'ny Baiboly amin'ny 2018-2022
Top 10 horonan-tsary momba ny mpanoratra
Anglisy ho an'ny tanjona ara-pitsaboana - Manampy ny marary
Ny knife ao amin'ny boky
Inona no Jennifer Movies 10 Best Movies?
Fantaro raha tena marina tokoa ny olona matsiro na ny angano Urban
Ny Mineral Photo Gallery sy ny Hira
101 Mpanjifa Hanombohana Anao
Ireo mozika amin'ny ambaratonga ambony indrindra
Lorasa College GPA, SAT sy ACT Data
Mpanolotsaina Sekolin'ny Oniversite vs Mentor: Inona ny fahasamihafana?
Ahoana no fiasan'ny Qigong?